Carabey “Galmudug Iyo DFS Khilaaf Kama Dhaxeeyo” (Wareysi) – Goobjoog News
Carabey “Galmudug Iyo DFS Khilaaf Kama Dhaxeeyo” (Wareysi)
Maxamed Xaashi Carabey, madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug ayaa sheegay in aanu xilligan jirin khilaaf ka dhaxeeya maamulka Galmudug gaar ahaan garabkooda iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya.
Waxa uu sheegay in ay sax tahay khilaafka maamulkooda u dhaxeeya islamarkaana keenay iney ku kala shaqeeyaan Cadaado iyo Dhuusamareeb, balse aanay jirin wax ay dhankooda dowladda isku qabteen.
Carabey ayaa sheegay in ay is khilaafsan yihiin DFS iyo garabka madaxweyne Xaaf waa sida uu hadalka u dhigaye.
Dhanka kale, Carabey ayaa sheegay in sababaha khilaafka aan uga dhex dhammaan Galmudug ay tahay waxgaradkii iyo siyaasiyiin kasoo jeedday deegaannada maamulkaasi oo si dhab ah ugu istaagin xallinta khilaafyada jira.
Shariif Roobow “Dowladda Ayaa Dayacday Amniga Muqdisho”
Mareykanka: Dhimista Ciidankeenna Ma Saameyn Doonto Soomaaliya.
Dhageyso: Ciidanka DFS Oo Howlgal Ka Wada Deegaanka Buulo-mareer, Sh/hoose